के हो गोनोरिया ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← थप अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सका लागि आह्वान
समयमा संविधान बन्न नसक्दा सबैको मन खिन्न: राष्ट्रपति →
गोनोरिया हुँदा यौनांग पोल्ने, योनिबाट सेतो पानी, पहेँलो पानी र पिप बग्ने, पुरुषको पिसाबनलीबाट पिप आउने, यौनांग सुन्निने र चिलाउने गर्छ ब्याक्टेरियाका कारण यौनांगमा संक्रमण भई पिप बग्ने समस्या गोनोरिया हो । असुरक्षित यौनसम्पर्कको कारण एक व्यक्तिबाट अर्कोमा गोनोरिया जीवाणु सर्ने चिकित्सक बताउँछन् । संसारमा १०औं लाख महिला र पुरुष गोनोरियाबाट प्रभावित रहेको चिकित्सकहरूको अनुमान छ । तर, एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा र गोनोरिया लागेको व्यक्तिले छुँदैमा यो रोग लाग्दैन । गोनोरियाको ब्याक्टेरिया संक्रमण हुन विशेष किसिमको वातावरण चाहिने चिकित्सकको विश्वास छ, जुन यौनसम्पर्कबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सो जीवाणु शरीरको बाहिरी छाला, हात वा खुट्टामा टिक्न सक्दैन । यो योनि पिसाबनली र घाँटीभित्रको भागमा मात्र रहन सक्ने बताइएको छ ।
गोनोरिया हुँदा यौनांग पोल्ने, योनिबाट सेतो पानी र पहेँलो पानी, पिप बग्ने, पुरुषको लिंगबाट पिप आउने, यौनांग सुन्निने र चिलाउने गर्छ । गर्मीमा बढी र जाडो महिनामा गोनोरियाको समस्या कम हुँदैन । तर, गर्मीमा योनि चिलाउने ढुसी बढ्नेलगायतको समस्या हुन्छ । जथाभावी यौनसम्पर्क गर्नाले गोनोरियालगायतको यौनरोग बढ्ने यौनरोग विशेषज्ञ डा. भाष्करमोहन कायस्थ बताउँछन् । ‘क्लाइमाइडिया’का कारण पनि त्यस्तो पिप आउँछ । पुरुषमा मूत्रनलीबाट पिप आए अर्को कारणले प्रमाणित नगरेसम्म यौनरोग नै मानिने चिकित्सक कायस्थले बताए । तर, कहिलेकाहीँ चोट लागेर पनि पिप आउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । गोनोरिया हुँदा श्रीमान्/श्रीमतीलाई एकसाथ उपचार गर्नुपर्छ । गोनोरिया लागेपछि ९० प्रतिशत पुरुषको पिसाबनलीबाट पिप आउँछ र पिसाब पोल्छ । तर, महिलामा ५० देखि ८० प्रतिशतमा लक्षण नै नदेखिन सक्छ । महिलाको योनिबाट सेतो पानी त्यत्तिकै पनि गइरहेको हुन्छ । श्रीमान्/श्रीमतीसँग मात्र यौनसम्पर्क गर्दा गोनोरिया लाग्दैन ।
गोनोरिया भएर पिप आउने समस्या भएमा समयमै उपचार गराउनुपर्छ । समयमै उपचार नगरे संक्रमण सरेर शरीरको अन्य भागमा पनि जान्छ । जीवाणुहरू मूत्रनली हुँदै अण्डकोषमा पुग्छन् । त्यसले अण्डकोष सुन्निन्छ । रगतवाट जीवाणुभित्र गएर शरीरका जोर्नीमा असर गर्न सक्छ । हत्केलामा पनि दुख्नेखालको स-साना फोका आउन सक्ने चिकित्सक कायस्थले बताए । ‘शरीरको कुनै पनि अंगमा जान सक्छ, महिलामा छ भने समयमै औषधि नगरे पाठेघरमा संक्रमण गराउन सक्छ,’ उनले भने । त्यस्तो स्थिति आए डिम्ब बाहिनी नलीमा संक्रमण भई बाँझोपन पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उपचार नगरी बसे पेटमा पिप जमेर तल्लो पेट दुख्ने समस्या आउन सक्छ, महिलामा । त्यसैले यौनांगमा पिप आउने समस्या भए तत्काल उपचार गराउन उनको सुझाब छ । त्यस्ता समस्या भएकाले आफूखुसी औषधि खान नहुने उनको भनाइ छ । समस्या चिकित्सकलाई नै देखाउनुहोस् । अहिले यौनरोग’bout हेल्थ असिस्टिेन्ट र सिएमए गरेकालाई पनि विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा चिकित्सकले तालिम दिएका छन् ।